अपराधि लाइ कारबाहि गर – नेपाल डायरी डट कम
मार्च 24, 2007 मार्च 24, 2007 by nepaldiary
अपराधि लाइ कारबाहि गर
नेपाल डायरी डट कम @ 3:00
अपडेट :-पक्राउ पर्नेहरुमा राम जनम दास, रघुनाथ महतो, बब्लु राउत, ओयनाथ राउत, लालबाबु पासवान र बिनोद राउत छन । प्रहरी ले उनिहरु बाट केहि हतियार समेत बरामद गरेको जनाएको छ । उनिहरुलाइ सदरमुकाम गौर र सिरसिया गाबिस बाट पक्राउ गरीएको हो ।
अपडेट :- यसै बिच प्रहरी ले रौतहट घटना का ६ जना दोसि हरुलाइ अहिले भर्खर पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ ।
गौरमा बुधबार भएको घटनामा संलग्न भागेर सिमापारी भारत् गएका हरुलाइ पक्राउ गर्न भारतीय सुरक्षा अधिकारीले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौर् मा हिजो भएको बैथक् मा भारतको सीतामाढी जिल्लाका डीएम सुमन कुमार, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण गौतम तथा गौरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ओझालगायतको संयुक्त बैठक पछि उक्त कुरा बताएको हो ।
तर मलाइ भने भारतीय प्रहरिले दोशि प्रक्रन सहयोग गर्लान भन्ने कुरामा भने संकै लाग्छ । आज सम्म भारत ले राम्रो कुरामा कहिले पो नेपाल लाइ सहयोग गरेको छ र? अर्को कुरा आफ्नै आखा अगाडी यत्रो नरसंहार (हे.भिडियो) हुदा मुक दर्सक पस्ने प्रहरेले अहिले भारतिय समक्ष गोहि को आसु बगाउनुको के अर्थ हुन्छ? अझै पनि कतिपय अपराधि हरु आफ्नै घरमा लुकेर बसेका र नेपाल मा रहेका भन्ने समाचार आइरहदा पनि प्रहरि किन तिनिहरुलाइ पक्राउ गर्न सक्दैन । की नेपालको प्रहरी प्रसासन अन्य कुनै सक्ति केन्द्र बाट संचालित छ ?
उता गृहमन्त्रालय ले रौटहटका प्र जि अ माधव ओझा लाइ ग्रह मन्त्रालय फिर्ता बोलाएको छ । सरकार ले आदेश नमानेको र विवेकसमेत प्रयोग नगरेको भन्दै ओझालाई फिर्ता बोलाएको हो । रौतहत बाट प्राप्त जानकारे अनुसार उक्त दिन
ओझा सेनाको ब्यारेकमा तास खेलेर बसेका थिए । । प्रहरी ले कर्फ्यु लगाउन लिखित आदेश माग्न खोज्दा उनी भेटिएका थिएनन् र प्रहरि आफैले माइकिङ गरी कर्फ्यु लगाएको थियो । माओबादीले उक्त घटना मा नेपाली वा बिदेसि सेना ले गोलि हानेको आरोप लगाइरहदा ओझा किन ब्यारेक मा तास खेलेर बसेका थिए र किन कर्फु आदेस दिन मानेनन? कतै ब्यारेका मा बसेर ओझा लगायत हरुले नै यो नरसंहार मक्चाएका त होइनन?
गौर घटनापछि देसै भरी फोरमका कार्यक्रम र गतिविधिमा निगरानी राख्न गृह मन्त्रालयले मातहतलाई निर्देशन दिए को छ । देस भरि नै फोरम का कार्यकर्म माथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । मोरङ प्रशासनले फोरमको गतिविधिलाई ध्यान दिंदै शनिबारदेखि चार दिनसम्म विराटनगर उपमहानगरपालिकाभित्र सभा जुलुस गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यसै गरी सिराहाको गोल बजारमा फोरम ले कार्यक्रम गर्न लागेको र सो कार्यक्रम् मा पनि हिंसा हुन सक्ने डरले सरकार ले आज सिरहा मा कर्फ्यु लगाएको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरमले माओवादीलाई मधेसी, आदिवासी, जनजाति र दलितको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन भएको आरोप लगाएको छ । फोरमका उपाध्यक्ष किशोरकुमार विश्वासले उक्त आरोप लगाएका हुन् । फोरमलाई हरेक प्रकारले प्रतिकार गर्ने, आक्रमण गर्ने माओवादीको क्रियाकलापले मधेसी मात्र नभई आदिवासी, जनजाति र दलितको दुस्मन भएको प्रमाणित भएको आरोप विश्वासले लगाए । उफ ! जो चोर उसैको ठुलो स्वर !!!
तपाइले यो समाचार त सुनिसक्नु भयो कि मानब अधिकार बादी हरुले गौर घटनालाई क्रुरताको पराकाष्ठ भएको र दक्षिणतर्फ फोरमको मञ्चपछाडि आठवटा भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधन राखिएको बताएसकेका छन ।अब तपै आफै भन्नुहोस् सरकार कतिसम्म झुठ बोल्छ र यो घटना लाइ नजर अन्दाज गरेरहेको छ भनेर। नेपाल भारत खुल्ला सिमाना भएपनि गाडी त उडाएर ल्याउन सकेदैन क्यारे । भारत बाट नेपाल होस वा नेपाल बाट भारत होस सबारी साधन ल्याउन सिमाना मा सबारी दर्ता गर्नु पर्छ र त्यो पनि कर तिरेर निस्चित समयका लागि मात्र ल्याउन पाइन्छ । प्रसाशन वा अध्यागमन कार्यालयमा त पक्कै पनि रेकर्ड होला । कि प्रहरि प्रसाशन आफैले नरसंहार मच्चाउन सिमानामा दर्ता नगरी ति गाडी ल्याएको हो? नत्र कस्ले त्यो गाडी ल्यायो? ति गाडी कस्का हुन? नलायक सरकार किन खोजि र छानबिन गर्दैन? मलाइ भने संकै लाग्छ , यत्रो घटना हुदा पनि एक जना पनि पक्राउ नपर्नु , तनाब र हिंसा हुने पुर्बानुमान हुदा हुदै पनि प्रहरि प्रसासन मौन बस्नु ! पक्कै कुनै गम्भिर सडयन्त्रै हो जस्तो लाग्छ मलाइ ।
अघिल्लो तस्बिर आफै बोल्छ ।
अर्को गच्छेदारको टाउको चै किन दुख्यो?